4 အလွှာမြင့်သော TG ဘုတ်အဖွဲ့ Multilayer PCB အပြာရောင်မှင် 2/1/1 / PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း ENIG 2oz PCB Quickturn PCB Fast Delivery ပြီးစီး - တရုတ်နိုင်ငံ4အလွှာမြင့်သော TG ဘုတ်အဖွဲ့ Multilayer PCB အပြာရောင်မှင် 2/1/1 / PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း ENIG 2oz PCB Quickturn PCB Fast Delivery ပေးသွင်းပြီးစီး,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » မြင့်မားသော TG PCB
4 အလွှာမြင့်သော TG ဘုတ်အဖွဲ့ Multilayer PCB အပြာရောင်မှင် 2/1/1 / PCB FR4 TG170 ပစ္စည်း ENIG 2oz PCB Quickturn PCB Fast Delivery ပြီးစီး
160*139.7MM / 1UP
4 အလွှာ ENIG 1U " TG170 ပစ္စည်း
4 ENIG finish ကိုနှင့် 2oz ကြေးနီပြင်အလွှာနှင့်အတူအလွှာမြင့်သော TG ဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg170 ဖြစ်ပါသည်. 1.6မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. နှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုရွှေ 1u ", အဆိုပါ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်4ENIG မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့် TG170 ပစ္စည်းနှင့်အတူအလွှာ. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်း PCB ဒီဇိုင်နာ, စျေးပေါ circuit board ။ ကျနော်တို့ပစ္စည်း FR4 ရှိ, Roger, Arlon, Nelco, Taconic, Teflon, CEM-1, CEM-3, လူမီနီယမ်, HIGH TG ဘုတ်အဖွဲ့, အမြင့် CTI,
high-တိကျစွာ Multilayer PCB 4Layers TG180 FR-4 .062" ပစ္စည်းငါအောင် Cu က Black ENIG finish ကို mask
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့2မာကြောနှင့်အတူအလွှာ 0.18mm ENIG 0.5oz Flex ကို PCB
2 အလွှာစံ PCB နီ soldermask FR4 1.6mm PCB Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံနှစ်ဦးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, multi အလွှာ HDI ဘုတ်အဖွဲ့, multilayer ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့(MLB), တင်းကျပ် multilayer ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. ခြောက်လအလွှာ, 1.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့